Iindaba -Ziqhutywa ngamaxabiso esinyithi aqinileyo, i-ore kulindeleke ukuba inyuke kwiveki yesihlanu ilandelelana
I-2302 NO.57 Jinbin Avenue, Isithili saseHedong, Tianjin, China
Intsimbi ye-HR & CR
Ingqele yentsimbi eqengqelekileyo yekhoyili kunye nomtya kunye nephepha
I-CRCA Cold eqengqelekileyo emnyama yekhoyili yentsimbi
I-CRNGO Ingqele eqengqelekileyo yengqolowa engacwangciswanga yentsimbi yentsimbi
Yentsimbi Camera Steel
I-Zinc-aluminium-magnesium zm ingxubevange yentsimbi
Ingqele yabumba iinkangeleko zentsimbi
Iifayile zentsimbi ezishushu ezishushu
Ezinye iiprofayili zensimbi
Iqhubekekisa Iimveliso zentsimbi
Isiseko sentsimbi kunye nokulungiswa
Intonga yocingo lwentsimbi kunye nokulungiswa
Pipe yentsimbi kunye neTyhubhu
Umbhobho sentsimbi kunye ityhubhu
Umbhobho wentsimbi kunye neetyhubhu
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ikhoyili yentsimbi engenanto kunye nomtya kunye nephepha
Ngefoyile ye insimbi
Umbhobho wesinyithi kunye netyhubhu
I-aluminium coil kunye nomtya kunye nephepha
I-aluminium esele yenziwe
Iqhutywa ngamaxabiso esinyithi aqinileyo, i-iron ore kulindeleke ukuba inyuke kwiveki yesihlanu ilandelelana
NgolwesiHlanu, ikamva le-ore yentsimbi liye lakhula kwiveki yesihlanu ilandelelana. Imveliso yentsimbi echasene nongcoliseko eTshayina, oyena mvelisi uphambili, yawa, kunye nokufunwa kwentsimbi kwihlabathi liphela, ukunyusa amaxabiso entsimbi ukurekhoda phezulu.
I-ore yentsimbi yexesha elizayo ka-Septemba kwi-Dalian Commodity Exchange yase-China ivale i-1.2% ukuya kwi-1,104.50 yuan (iUS $ 170.11) ngetoni nganye. Esona sivumelwano sisebenzisanayo sonyuke nge-4.3% kule veki.
Amaxabiso entsimbi kwi-Shanghai Futures Exchange aqhubekile nokunyuka kwawo, ngolwakhiwo lwe-rebar inyuka nge-1.7% ukuya kwi-5,299 yuan ngetoni nganye, kuphela ngaphantsi nje kwerekhodi ephezulu ye-5,300 yuan.
Iikhoyili ezishushu ezisongelweyo ezisetyenziswa kwimizimba yeemoto nakwizinto zasendlini zonyuke nge-0.9% ukuya kwi-5,590 yuan ngetoni nganye, emva kokubetha irekhodi eliphezulu le-yuan eyi-5,597.
Abahlalutyi bakaJP Morgan bathi kule ngxelo: "Lo ngumjikelo wentengiso yeenkomo zakudala kushishino lwentsimbi." "Njengokuba ilizwe lase China langaphambi kokuba lisuse ubhubhane kwaye liphendule kumanyathelo okhuthazo, ibango liyabuya ngokukhawuleza."
Olu luphawu oluhle lwaseTshayina, elilelona lizwe lithumela ngaphandle izinto zentsimbi kunye neemveliso zentsimbi.
Abahlalutyi bakaJP Morgan bathi iingxoxo malunga nokuqhubeka kokucinezelwa kweTshayina kwimveliso yentsimbi zikwancedile namaxabiso eentsimbi zaseAsia ukunyuka, ngeeoyili ezishushu ezisongekileyo ezinyuka ziye kwi-900 yeedola ngetoni.
Iindaba ezixhaswa ngurhulumente "China Metallurgical News" inike ingxelo yokuba kulandela ukuqulunqwa kweedolophu ezibalulekileyo zokwenza intsimbi ezinje ngeTangshan, iHandan City, iPhondo laseHebei liza kuphumeza amanyathelo olawulo lwemveliso yentsimbi kunye necoking industry ukusukela nge-21 ka-Epreli ukuya kwi-30 kaJuni.
Ukunyuka kwamaxabiso esinyithi kunyuse umda wenzuzo yemitshini yentsimbi yaseTshayina, ebangela ukuba bandise imveliso kunye nokuthenga intsimbi.
Ngokwedatha evela kwi-SteelHome Consulting, indawo yentsimbi yase-China ithengise nge-US $ 187 ngetoni nganye ngoLwesine, isezantsi kune-10 yeminyaka ephezulu ye-US $ 188.50. '
I-BMW (BMWG.DE) iphinde yaphindaphinda imbonakalo yayo yonyaka opheleleyo yengeniso ngolwesiHlanu, kodwa yathi ilindele ukuba unyaka uphela uzakuhlala ungazinzanga, kwaye ukunyuka kweendleko zezinto ezingafunekiyo kunokonakalisa umvuzo ozayo.
Ngokwengxelo yeSouth China Morning Post, inkundla yaseHong Kong ivume ibheyile engxamisekileyo yowayesakuba yinkokheli yeDemocratic Party uWu Zhiwei ngolwe-Sihlanu, owayegcinwe entolongweni ngenxa yokophula umthetho wezokhuselo welizwe laseHong Kong ukuze akwazi ukuya kumngcwabo kayise
I-Reuters, iindaba kunye nengalo yemithombo yeendaba kaThomson Reuters, ngumboneleli weendaba osasazwayo omkhulu kwihlabathi, ngezigidi zabantu abazindwendwelayo yonke imihla. I-Reuters ibonelela ngeshishini lobungcali, ezezimali, iindaba zesizwe nezamazwe aphesheya ngeetheminali ze-desktop, imibutho yeendaba kwihlabathi liphela, iminyhadala yemizi-mveliso kunye ngqo nabathengi.
Thembela kumxholo onegunya, ulwazi lobuchwephesha kumagqwetha nabahleli, kunye neendlela ezichaza umzi-mveliso ukumisela ezona ngxoxo zinamandla.
Esona sisombululo sibanzi sokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho ezintsonkothileyo nezisoloko zisanda zerhafu kunye nokuthobela.
Ulwazi, uhlalutyo kunye neendaba ezizodwa kwiimarike zezemali-ezinikezelwa nge-intuitive desktop kunye ne-mobile interface.
Iscreen somngcipheko omkhulu wabantu kunye namaziko kwihlabathi liphela ukunceda ukufumanisa ingozi efihliweyo kubudlelwane bamashishini kunye neenethiwekhi zonxibelelwano.
Ixesha Post: May-07-2021